SP-L07 350ml Afayeenka Bluetooth Afka Kantaroolka Telefishinka Smart WIFI Aroma Diffuser, Shiinaha SP-L07 350ml Afayeenka Bluetooth Afka Xakameynta Smart WIFI Aroma Diffuser Soosaarayaasha, Shirkadaha, Warshadaha - Sunpai warshadaha Xadidan.
SP-L07 350ml Afayeenka Bluetooth Afka Kantaroolka Smart WIFI Aroma Diffuser
Details Baako: 18Biyo / Carton
Shuruudaha Payment: 50% dhigaal, 50% dheelitirka kahor bixinta
350ml Afayeenka Bluetooth App Control Smart WIFI Aroma Diffuser
Samee nolol udgoon iyo raaxo leh
1. Xakameynta Codsiyada: xakamee dhammaan howlaha kala firidhsan taleefanka yar ee loo yaqaan '' Hydrone ''. Ka dib markii amarka si guul leh loo soo diro, diffuserku wuu shaqeyn doonaa iyada oo aan taleefan lagu soo darin APP. Looma baahna inaad u lugeeyso aaladda si aad ula qabsato shaqada laakiin hadda waxaad ku xakameyn kartaa diffuser-kaaga adigoo wata app taleefankaaga!
5.Calorful Night Light: Waxay leedahay nalal iftiin leh oo iftiin leh. Nalku wuxuu wareegi karaa 7 midab. Ama, waxay u dejin kartaa hal midab oo go'an.
6.Timer: Adigoo leh "MIST" badhanka, waxaad dejin kartaa 5 saacad timir 30 min, 60 min, 120 min, 180min iyo sii wadis ah. Waqtiga 7-15 saacadood.
saacad 30/60/120 / 180min / ON
Cabbirka Cutubka Φ14.3 * 17cm
miisaanka Unit 660g
Cabbirka sanduuqa midabka 15 * * 15 17.9cm
Xidhmada 18 xabbo / kartoon
Cabbirka kartoonka 47 * * 47 38cm
GW / kartoon kgs 13